Dagaal dhex-maray Ciidanka dowladda & Shabaab iyo khasaaro ka dhashay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Dagaal dhex-maray Ciidanka dowladda & Shabaab iyo khasaaro ka dhashay
Dagaal dhex-maray Ciidanka dowladda & Shabaab iyo khasaaro ka dhashay
Dagaalkaan oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa uu ka dhacay degaanka Awdiinle ee Gobolka Baay,waxaana uu dhex-maray Ciidanka dowladda & kuwa Koonfur Galbeed oo dhinac ah iyo Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid,kadib markii xalay ay Al-Shabaab weerar ku qaadeen Saldhiga Ciidamada Dowladda & kuwa Koonfur Galbeed ee degaanka Awdiinle,waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday in ka badan saacad kaas oo geystay khasaaro kala duwan.
Mid kamid ah Saraakiisha Ciidamada Dowladda ee Gobolka Baay ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarkii Al-Shabaab ayna fashiliyen sidoo kale ay ka dileen 5 Xubnood oo ka tirsanaa waa sida uu hadalka u dhigay.
Maamulka degaanka Awdiinle ayaa dhankooda waxaa ay sheegeen inay hayeen xogta ku saabsan weerarkaas,isla markaana Ciidamada Dowladda & kuwa Koonfur Galbeed ay u diyaar sanaayeen iskana difaaceen.
Wararkii ugu dambeeyay ee saaka aan ka heleyno degaanka Awdiinle ee Gobolka Baay ayaa waxaa ay sheegayaan in xaaladu ay tahay mid degan,hayeeshee Ciidamada Dowladda & kuwa Koonfur Galbeed ay wadaan howlgallo kala duwan oo ay ka sameeynayaan duleedka degaankaas.
Previous articleMaxaa kasoo baxay kulankii Guddoonka Baaralamaanka iyo Madasha Xisbiyada?
Next articleKoonfur Galbeed oo Shaqada u fasaxday Guddoomiye Degmo